Jawaabaha Su’aalo Muhiim Ah Oo La Iska Weydiiyo Coronavirus? | Aftahan News
Jawaabaha Su’aalo Muhiim Ah Oo La Iska Weydiiyo Coronavirus?
March 18, 2020 | Filed under: Aragtida Bulshada | Posted by: Mursal
Xanuunka xawaaraha ku faafaya ee Caronavirus oo noqday hadal haynta ugu badan ee warbaahinta adduunka iyo guud ahaan heerarka iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka dunida, ayaa ay dad badani iska weydiinayaan su’aalo muhiim ah. Qormadan waxa uu Geeska Afrika kaga jawaabayaa qaar ka mid ah su’aalaha muhiimka ah ee la iska weydiinayo xanuunkan ama ay tahay in la iska weydiiyo. Waxaana xusid mudan in jawaabaha su’aalahani ay yihiin kuwo lagu kalsoonaan karo oo ay baahisay shabakadda Aljazeera badankoodana laga soo xigtay hay’adda caafimaadka adduunka.
Waa maxay Caronavirus?
Ugu horreyn Coronavirus waa Fayras ee ma’aha caabuq sida ay dad badan oo Soomaali ahi hadda ku sheegaan, waana ay kala duwan yihiin caabuqa iyo Fayraska oo ah erey uu Afsoomaalig ergis ahaan sidiisa ugu isticmaalo. Haddaba Karoona-fayras waa koox aad u tiro badan oo ay Fayrasyo noolaha dad iyo xayawaanba ku keeni kara xanuun.
Waxaa jira Farayso kala duwan oo Karoona ah, oo qofka ku keena xaalado caafimaad darro oo aabaraya habdhiska neefsiga. Xalaadahaas oo khatartoodu sii kala darantahay waxa ay u dhexeeyaan kuwo la mid ah Hargabka caadiga ah oo aan dhib buuran looga baqan iyo kuwo gaadha xaalad aad u khatar badan.
Waa maxay xanuunka Covid-19?
Noocyada Fayraska Karoona ee aynu soo xusnay, noociisa waqtigan taagan oo aad u khatar badan ayaa xanuunka ka dhasha waxa ay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO sumad uga dhigtay ‘Covid-19’. Inta badan fayrasyada noocyadooda waa la sii yaqaannaa, haddii aanay ahayn kuwo cusub. Laakiin dhibaatada hadda dhacday waa in Fayraska Karoona noociisan keenaya ‘Covid-19) uu yahay nooc aan hore looga sii warqabin jiritaankiisa, ka hor intii aanu bishii Diisambar 2019 kii ka soo if bixin magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
Maxaa calaamado u ah xanuunka Covid-19?
Calaamadaha aad caanka u ah ee xanuunka Covid-19 leeyahay waxaa ka mid ah xummad aad u badan, burbur iyo daal badan oo joogto ah iyo qufac engagan. Dadka qaar waxaa u raacda garaac iyo xanuun badan oo jidhka oo dhan ah, cabudh sanka ah, cunaha ama dhuunta oo qofka xanuunka iyo shuban. Inta badan calaamadahani waxa ay ku bilowdaan si aad u khafiif ah, laakiin marba marka ka dambaysa sii kordhaysa.
Waxaa xusid mudan in xanuunkani uu mararka qaarkood qofka ku dhaco iyada oo aan wax calaamad ah lagu arkay, waana sababta kallifaysa qofka looga shakiyo in muddo meel gaar ah lagu hayo. Si looga hortago haddii xanuunka oo aan calaamado lahayni hayo, in uu faafo.
Dhimashadiisu waa heerkee?
Xanuunkani caadi ahaan kuma tirsana xanuunnada dilaaga ah, waayo dadka uu ku dhacaa boqolkiiba 80 waa ay ka bogsadaan, iyaga oo aan u baahan wax dawo ah. Haddii aad is weydiinayso sababta adduunku uga qaylinayo, xanuun dhimashadiisu sidaas u yartahay ka bogsashadiisuna u fududahay? Jawaabtu waa ay dhowdahay oo waa in uu yahay xanuun si fudud u faafaya. Sidaa awgeed ay qasab tahay in laga taxaddaro si looga hortago in uu ku dhaco dad xanuunno kale oo ay qabaan awgeed uu xanuunkani si fudud u dili karo.
Goormaan xanuunkan isaga shakiyi karaa? Maxaa se aan yeelaa?
Haddii aad isku aragto xummad badan, qufac engagan iyo neefsiga oo aad qawadayso, si dhaqso ah ula xidhiidh cisbitaal aad ka helayso daryeel caafimaad oo ku habboon xaaladaha xanuunkan ka dhasha oo neefsigu horreeyo.
Cilmi ahaan ma la filayey in Fayraskani uu soo bixi karo?
Mar kastaba waa la fishaa in uu fayras cusubi abuurmo. Waxaana taas kallifaysa sooyaalka fayraska ee adduunka Soo maray oo marar kala duwan loo soo joogay fayrasyo hadba qaab cusub isu abuuray ama u samaysmay. Fayrasyadaas waxaa ugu caansan Infuluwansaha (Influenza) oo ka kooban toddoba jinsi iyo Karoonaha. Laakiin dhibaatadu waxa ay tahay in aan la dareemayn goorma iyo sidee uu ku dhacayaa abuuranka Fayrasku ama halkee uu ka dhacaa. Sidaa awgeed hay’adda caafimaadka adduunku waxa ay mar kasta ku jirtaa xaalad diyaargarow, waxa aanay dawladaha adduunka kula talisaa in ay sameeyaan kaabayaal caawinaya in si dhaqso ah looga hortago ama loola tacaalo xaalad kasta oo uu Fayras samaysmo.